Shirkadaha Apple iyo Samsung oo isku maran - BBC News Somali
Shirkadaha Apple iyo Samsung oo isku maran
Lahaanshaha sawirka APPLE
Image caption _
Shirkadaha teknooloojiyadda ee kala ah Apple iyo Samsung ayaa soo kala dhex galay khilaaf ku aadan nidaamyada u gaarka ah shirkad kasta oo ay isku haystaan.
Shirkadahan ayaa dawcaddooda taalla maxkamad u taalla Carlifonia ee dalka Mareykanka oo ku salaysan inay ku muransan yihiin shan xuquuq ah oo ay wax soo saarkooda teknooloojiyadda ku suuq geeyaan.
Shirkadda Apple ayaa sanadkii 2012-kii la guddoonsiiyay 1.05 bliyan oo doolar kaddib markii garsooraha maxkamadda uu sheegay in shirkaddan laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ay soo faragelisay wax soo saarka teknooloojiyadda iphone.
Ganaaxan lagu soo roggay shirkadda Samsung ayaa la rabay in la yareeyo kaddib markii dacwado ay gudbisay shirkadda Galaxy ee samaysa teleefoonada caaqilka ah.
Waxaa laga maarmaan noqon doona in dacwado hor leh dib loo dhagaysto kaddib markii maxkamadda sare ay soo saartay go'aan kala caddaynaya ganaaxa la saraay shirkadda Samsung.
Waxaa laga yaaba in garsoorayaasha ay kusii dhaganaadaan go'aankii maxakamadda ee horraan ee ahaa in shirkadda Samsung ay isticmaashay shan kamid ah xuuquuqihii teknooloojiyadda ee u gaarka ahaa shirkadda Apple.
Shirkadaha Apple Iyo Samsung wax faafahin ah kama aysan bixinin khilaafkan soo harreeyay.
Maxay isku haystaan shirkadahani?
Shirkad kasta waxay leedahay xuquuq u gaar ah oo muddo 15 sana ah ay u isticmaalayso wax soo saarkeeda teknooloojiyadda .
Dacwadda hadda taagan ayaa ah in shirkadda Samsung in lagu helay dambi ah inay isticmaalaysay shan kamid ah xuquuqda u gaarka ah shirkadda Apple islamarkaana ay soo farogelisay nidaamkeeda teknooloojiyadda.